API ... Onye na-ewu APUI? | Martech Zone
Saturday, October 28, 2006 Tọzdee, Machị 7, 2013 Douglas Karr
Anyị enwela ihu mmemme maka ngwa ngwa nwa oge na ụlọ ọrụ. Ihe ịma aka nke API na - achọta ihe mmepe eji eme ihe iji kwado mmemme. Ọ dịghị mfe. N'iji usoro mmemme ọ bụla nke oge a, a na-achọkarị ka ị biputere ndị na-agbanwe agbanwe na ọrụ wee weghachite nsonaazụ tinye XML (eXtensible Markup Language).
Na 2000, ana m arụ ọrụ maka Database Marketing Consultancy na Denver, Colorado ma anyị nwere ngwaọrụ akpọrọ Sagent Solutions. E mechara zụta Sagent Ndi otu1. A maara Group1 nke ọma na ebe a na-ere data nchekwa data iji wuo ụfọdụ ngwa dị egwu. Amaghị m ihe mere ngwaahịa Sagent nke m na-ejibu, mana ha dị egwu. N'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo gị, ị gbanwere 'ị nwere ike ịdọrọ ha na arụmọrụ. Ntinye na ntinye ọ bụla nke mgbanwe ọ bụla ga-ekekọrịta na-agbanwe agbanwe na-akpaghị aka.
Yabụ, enwere m ike iwulite ọrụ iji bubata faịlụ, maapụ mpaghara ahụ na nchekwa data, gbanwee ụkpụrụ nke ubi, sachaa adreesị, geocode adreesị, bupụ faịlụ ahụ emechara, wdg. Enwere m ike kewaa arụmọrụ ma mee ọtụtụ usoro na otu data ahụ. Na nyochaa na 'ngwụcha azụ' nke arụmọrụ, Sagent chebere atụmatụ ahụ iji XML. Nke ahụ pụtara n'ụzọ pụtara n 'ị nwere ike iwulite ma rụọ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ngwọta ahụ bụ ọnụọgụ ọnụọgụ 6, mana iwulite atụmatụ iji gbanwee ụlọ nkwakọba ihe were nkeji karịa ụbọchị.
Site na mbido API, Ọrụ Weebụ, SOAP, Flex, Ajax, wdg.… Achọrọ m ịmata ihe kpatara na onwebeghị onye wuru websaịtị mmemme mmemme onye ọrụ. Ndị ọzọ okwu, a Dọrọ na dobe interface maka API oku. Jiri SOAP, ụlọ ọrụ na-echekwa WSDL (Asụsụ Ozi Definition Asụsụ) nke bụ ezigbo encyclopedia mmemme maka otu esi eri ọrụ weebụ. N’ime afọ ise ọ nwebeghị onye nwere ike ị mepee ụzọ esi atụgharị asụsụ API ma ọ bụ Ọrụ Weebụ iji jiri anya rụọ ọrụ ọrụ? Onwere onye na aru oru na ya?
Nke a bụ echiche $ 1 ijeri maka ụbọchị ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike iru interface Flex nke nwere ike ịgụ WSDL ma jiri anya ya na-anọchite anya oku ahụ, ịnwere ike ịdọrọ ma dobe mmekọrịta dị n'etiti oku ahụ. Ọ bụ njikọ na-efu nke web… na-eme ka web nwee ike ịnweta onye ọ bụla iji 'programmụ' ngwọta nke ha na-enweghị ịghọta asụsụ ọ bụla.
Tags: APIntinye ntinye ihe omumeapui